Mamarana ny Fipetrahany Tao Amin’ny Tranon’ny Filoha Indiana Ilay Artista Bangladesh Malaza Shahabuddin AhmedShahabuddin Ahmed · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2017 20:57 GMT
Artista Bangladesh Shahabuddin Ahmed. Pikasary avy amin'ny lahatsary Youtube avy amin'i Sayeed Iqbal.
Bangladeshi mpanao hosodoko i Shahabuddin Ahmed no lasa artista vahiny voalohany miaina ao amin'ny Rashtrapati Bhavan, ny tranon'ny Filoha Indiana Pranab Kumar Mukherjee, toy ny mpanakanto-ao-amin'ny-toeram-ponenany.
Tranobe fonenana marososona andrian-toetra ny Rashtrapati Bhavan, miaraka amina tantara maro, mitoetra ao andrefan'i Rajpath any New Delhi, India. Tamin'ny 18 Febroary ka hatramin'ny 22 Febroary 2017 no nipetrahan'i Ahmed tao.
— Filohan'i Inde (@RashtrapatiBhvn) 18 Febroary 2017
Artista & mpiady ho an'ny fahalalahana, nanomboka ny fonenany tao Rashtrapati Bhavan androany i Shahabuddin Ahmed avy any Bangladesh sy ny zanany vavy Chitralekha pic.twitter.com/ieUIRrUQtW
Mpanao hosodoko iray lohalaharana izay malaza erantany i Ahmed. Teraka tamin'ny 1950 izy ary nianatra tao amin'ny Akademian'ny Zavakanto tao Dhaka. Niditra hanampy ny ezaka ho an'ny Fialàna amin'ny Ady tao Bangladesh sy niady ho an'ny fahaleovantenan'i Pakistana izy tamin'ny 1971. Tany amin'ny tapaky ny taonjato 1970 tany izy dia nahazo vatsim-pianarana hianatra tao amin'ny Sekoly Ambony Fianarana Zavakanto ao Paris ary niaina tany nandritra ny efapolo taona mahery.
Araka ny Arts Trust, izay mampiroborobo ny zavakanto Indiana maoderina, miantehitra be amin'ny herin'ny fihetsika ho toy ny fomba fanehoankevitra artistikany i Ahmed: ”Ny fiangaliny rafitrano toy ny tarehy mitodika mankany an'habakabaka eo am-pitadiavana hazavana sy hery, dia fifangaroana hafahafan'ny dindo Tandrefana miorim-paka ao amin'ny tany niaviany.” Matetika ny asan'ilay artista no tokan-taratra arahina tsifitra loko mamirapiratra tsy mahazatra .
— Ishtar (@EvarHussayni) 10 Aogositra 2016
Arantiranty any amina efitrano fampisehoana haikanto maro manerantany ny asan'i Ahmed, anisan'izany ny Mozea Olaimpika ao Lausanne, Soisa, ny Mozea Bourg-en-Bresse ao Frantsa, ny Mozea Nasionaly ao Bolgaria ary ny Mozea Olaimpikan'i Seoul ao Korea Atsimo. Tamin'ny 1992 i Ahmaed, nahazo ny loka ”Dimampolo Mpahay Hosodoko Amin'ny Zavakanto Maoderina” tamin'ny Olaimpiadin'ny Kanto, Barselona, ankoatra ny nahazoany ny anaram-boninahitra manan-daza Frantsay hoe ”Ordre des Arts et des Lettres” (‘Chevalier de l'Ordre’-n'ny Kanto sy ny Haisoratra) tamin'ny 2014 noho ny zavatra nentiny ho an'ny zavakanto. Tany Bangladesh, nahazo ny Lokan'ny Andron'ny Fahaleovantena izy (Shwadhinata Puroskar) tamin'ny 2000.
Ao anatin'ilay fonenana, natao tao amin'ilay Efitrano Fampisehoana Haikanto ao amin'ny Rashtrapati Bhawan ny fampirantiana mandeha irery ny kanto nataon'i Ahmed antsoina hoe ”Shanti” (Fiadanana). Nahitana ny sary hosodoko miisa 12 nisy ireo olo-malazan'ny fahalalahana toa an'i Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore ary ilay mpandrafitra ny fahaleovantenan'i Bangladesh, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, ilay randrantahiry.
Mitentina 800 tapitrisa ropia ny vidin'ilay tranombakoka Rashtrapati Bhavan ary nisokatra tamin'ny taona lasa teo. Izany ihany no mozea ambanin'ny tany ao India izay misy fampirantiana ny endriky ny zavakanton'ny firenena amin'ny zava-misy virtoaly.
— Filohan'i Inde (@RashtrapatiBhvn) 21 Febroary 2017
Hifarana rahampitso ny fampiratiana ny hosodokon'ilay artista Bangladesh Shahabuddin Ahmed tao amin'ny Mozean'ny Efitrano Fampisehoana Haikanto Rashtrapati Bhavan pic.twitter.com/GTK7AOhMQt
Nolazain’ i Shahabudding tao anatina tafatafa niarahany tamin'ny Asian Age ny antony nanomezany ny lohateny ”Shanti” (Fiadanana) ho an'ilay fampirantiana :
Lasa hery lehibe ny tanibe Azia atsimo ary mijery mankaty aminay daholo izao tontolo izao. Tanora izahay, matanjaka ary manana ny tanjaka hitarihana fiainana am-piadanana tsy toy ny tontolo Tandrefana, izay miroborobo amin'ny alalan'ny fivarotana fitaovam-piadiana. Tsy mbola nampiasa fitaovam-piadiana ho an'ny fahefana mihitsy izahay. Miaraka amin'ny fampianaran'i Mahatma Gandhi, nasehon'i India an'izao tontolo izao fa naharesy an'ady tsy tamin-kerisetra izahay.
Tamin'ny 2013, natomboky ny Filoha Indiana Mukherjee ny fandaharanasa ‘Am-Ponenana’ ho an'ireo mpikaroka, artista ary mpanoratra, amin'ny tanjona hampaherezana ny hery anaty tia mamorona sy manavao ao anatin'ny olona ary hanokafana ny Rashtrapati Bhavan ho ana fandraisana anjara tsaratsara kokoa sy firotsahan'ny olon-tsotra bebe kokoa amin'ny asa ataony.